अभिभावकका लागि बालपुस्तक - नानीबाबु अनलाईन
पहिले आफैं पढ्नुस्
बालपुस्तकले ठूलालाई पनि एकपटक बाल्यकालको संझना गराइदिन्छ । भौतिक रूपमै नभए पनि बालकालमा फर्कन पाइन्छ । आप्mनो बाल्यकाल झल्झल्ती सम्झन र त्यसैमा रमाउन सकिन्छ । अहो ! म पनि यस्तै गर्थें वा हत्तेरी म पनि त यस्तै थिएँ ! भन्ने महसुस हुन्छ । उमेर ढल्किसकेकाहरू बालपुस्तक मार्फत् आफूलाई बाल्यअवस्थामा पु¥याएर आनन्दित हुन सक्छन् । बालपुस्तक एउटा योग जस्तै सावित हुन सक्छ जसले तनावहरूलाई कम गराउन मद्दत गर्दछ ।
असल अभिभावकत्व वहन गर्न
असल पुस्तक छनौट गर्न
किताबहरू ज्ञानका भण्डार हुन् । यिनले हामीलाई ज्ञान र आनन्द दुवै प्रदान गर्छन् । तर त्यसो भन्दैमा सबै पुस्तक सबैका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । अझ बालबालिकाका हकमा त उनीहरूका उमेर, रूची, आनीबानी अनुसार फरक फरक पुस्तक दिनु पर्ने हुन्छ । बालपुस्तक भन्दैमा जुन पायो त्यही पुस्तक दिने वा पढ्ने गर्नाले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुन पनि सक्छ । यसो भयो भने बालपुस्तकप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्ने संभावनासमेत हुन्छ ।
बालबालिकासँग गरिने व्यवहार सिक्न
बालबालिकासँग असल व्यवहार गर्न सकिएन भने त्यसले भोलि नकारात्मक रूप लिन सक्छ । बाल्यावस्थादेखि नै सुहाउँदो व्यावहार गर्न सकियो भने मात्र बालबालिका हुर्कदै जाँदा उनीहरूले असल व्यवहार सिक्छन् । बालबालिकासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ेबारे विभिन्न पुस्तक पाइन्छन् । यी पुस्तक अभिभावलाई नै लक्षित गरी लेखिएका हुन्छन् । तर यी पुस्तकहरु मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन् । प्रत्येक बालबालिकाका जसरी अनुहार फरक हुन्छन्, त्यसैगरी उनीहरूको शैली, सोच र व्यवहार पनि अलग अलग हुन्छन् । बालपुस्तकमा उनीहरूकै मनोविज्ञान समेटिने भएकाले यसको अध्ययनबाट धेरैभन्दा धेरै बालबालिकालाई बुभ्mने र सम्झने मौका मिल्छ । धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाको व्यवहार अध्ययन गरेपछि आफना बालबालिकाको व्यवहार कस्तो छ ? उनीहरूलाई कस्तो व्यवहार मन पर्दो रहेछ र कस्तो व्यवहार गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
बालबालिकाको प्यारो हुन
‘नाइँ म बाबासँग खाना खान्नँ, आमासँग खान्छु । नाइँ मामाले पढाउनु भए त पढ्दिन, माइजूले पढाउनु भए मात्र पढ्छु । नाइँ, हजुरआमासँग त बजार जान्नँ, हजुरबासँग भए मात्रै जान्छु’
पठन सीप र संस्कार बसाल्न